အန္တတိကတိုက် က ရေခဲတောင်ကြီးတွေ အရည်ပျော်သွားခဲ့လျှင် ကမ္ဘာပေါ်က ရေအောက်ရောက်သွားနိုင် တဲ့မြို့တော်များ – Pyit Time Htaung
By Pyit TimePosted on November 5, 2020 November 6, 2020
( မြန်မာ နိုင့်ငံ ကတော့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး ၅ ခုတိတိကို ရေအောက် ရောက်သွားမှာပါ…. )
အကယ်၍ အန္တတိကတို က်က ရေခဲတောင်ကြီးတွေ အရည်ပျော် သွားခဲ့လျှင် ကမ္ဘာမြေပုံပြော င်းသွားလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်…. လက်ရှိကမ္ဘာ့မြေပုံပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
အခုလက်ရှိကမ္ဘာမှာ ရေခဲတောင်ပေါင်း5million cubic miles လောက်ရှိနေပါတယ်။ အကယ်၍ လူတွေ တွင်းထွက်လောင်စာတွေ (fossil fuel တွေ) အလွန်အကျွံသွားစွဲခြင်း တို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ ဒီအခါကျလျှင် ရေခဲတောင်အရည်ေ ပျာ်မှုတွေနဲ့အတူ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင် က ပေပေါင်း ၂၁၆ ပေ လောက်မြင့် တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဘာဖြစ်လာမယ်ထင်ပါသလဲ?……………. မြို့ကြီးပြကြီးတွေ ပင်လယ်ရေအောက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလိုရေခဲတောင်တွေအရည်ပျော်မကျအောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ က ဦးစားပေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ လျှော့ချဖို့နည်းလမ်းတွေ ထိထိရောက်ရော က်ဖြစ်အောင်ပညာရှင်ေ တွသုတေသနပြုလု ပ်နေဆဲဖြ စ်ပါတယ်။ ဒီ Post မှာတော့ ရေခဲတောင်တွေအရည်ပျော်ကျလာလျှင် ဘယ်နိုင်ငံက မြို့တော်တွေရေအောက်ရောက်သွားမလဲဆိုတာ ဗဟုသုတအေ နနဲ့ ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
မြောက်အမေရိကတိုက်မှရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအပါဝင် ကနေဒါနိုင်ငံက မြို့ကြီးအချို့ ရေအောက် သို့မဟုတ် ရေလွှမ်း သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်မြို့တွေလဲဆိုတော့ –
– New York (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Boston (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Charleston (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Miami (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Tampa (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– New Orelans (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Houston (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Vancouver (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Veracruz (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Havana (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Cancun (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Honolulu မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အမေရိကနိုင်ငံက နာမည်ကြီးမြို့တွေလဲ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်မြို့တွေလဲဆိုတော့ –
– Georgetown (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Paramaribo (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Lima (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Bruenos Aries (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Montevideo (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်) မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အာဖရိကတိုက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလျှင်လဲ ခုမြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိနေတဲ့ Gambia ဟာဆိုလျှင်လဲ ရေအောက်နိုင်ငံဖြစ်သွားမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဘယ်မြို့တွေပါလဲကြည့်ရအောင် –
– Dakar (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Bissau (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Freeton (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Monrovia (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Cape Town (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Maputo (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Mombasa (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Mogadishu မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပတိုက် နှင့် အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံများ
တောင်တန်းတွေနဲ့လှပနေတဲ့ ဥရောပတိုက်ကနိုင်ငံတွေလဲ မလွတ်ပါ။ ဘယ်မြို့တွေဖြစ်လာမလဲဆိုလျှင် –
– London (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Amserdam (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Brusseis (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Copenhagen (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Stockholm (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Riga (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Talinn (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Helsinki (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– St. Petersburg (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Lisbon (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Barcelona (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Venice (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Odesa (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Rome (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Istanbul (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Baghdad (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Kuwait City (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်) မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သဲကန္တရတွေရှိနေတဲ့ ဩစတေးလျတိုက်လဲ ရေးဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်မြို့တွေပါမလဲဆိုလျှင် –
– Adelaide (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Sydney (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Melbourne (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Auckland (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Wellington (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်) မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူတို့နိုင်ငံရှိရာ အာရှတိုက်မှာလဲ ရေလွှမ်းမှုဒဏ်ကိုခံရမှာမလွဲပါ။ မြန်မာအတွက် သီးသန့် အောက်မှာပြောပြသွားပါမယ်။ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတော့တစ်နိုင်ငံလုံး ရေအောက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့မြို့တွေကတော့ –
– Mumbai (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Kolkata (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Dhaka (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Bangkok (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Phnom Penh (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Ho Chi Minh City (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Kuala Lumpur (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Singapore (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Manila (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Hong Kong (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Shanghai (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Qingdao (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Beijing (ရေအောက်မြို့ဖြစ်သွားနိုင်)
– Tokyo မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအချို့က ရေအောက်ရောက်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက –
– တနင်္သာရီတိုင်းဒေသအချို့ တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတိုင်းဒေသကြီး နဲ့ပြည်နယ်တွေရေအောက်ရောက်မယ်ဆိုတော့ မြို့တွေကို အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး။
အချုပ်ဆိုရသော် ကမ္ဘာ့မြေပုံမပြောင်းဖို့ နဲ့ ရေအောက်မြို့တော်တွေမဖြစ်ဖို့အတွက် Environmental သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အဖြေရှာနေသလို တဖက်မှာလဲ လူသားတွေကလဲ Climate Change နဲ့ Global Warming မဖြစ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်လျှောက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားရင်း…။
မူရင်းစာရေးသူ Environment-Health-Safety Myanmar (EHS Myanmar) အား လေးစားစွာ ခရက်ဒက်ပေးပါသည်။
Posted in KnowledgeTagged fossil fuel, တောင်အမေရိကတိုက်, မြောက်အမေရိကတိုက်, ရေခဲတောင်, အန္တတိကတိုက်, အာဖရိကတိုက်
Previous post Trump ကို ဘယ်နိုင်ငံတွေက ပြန်နိုင်စေချင်သလဲ….ဘယ်နိုင်ငံတွေက ပြန်မနိုင်စေချင်ဘူးလဲ
Next post မဲလိမ်လည်မှုတွေ ရှိနေသည်ဟု ထရန့်ပ်က သက်သေ မရှိဘဲ စွပ်စွဲပြီး ဘိုင်ဒန်က လူထုကို စိတ်အေးအေးထားရန် တိုက်တွန်း